ငါကြက်ဆင်ကနေ pancakes ချက်ပြုတ်ဖို့အဆိုပြုထား, ပန်းကန်အလွန်အရသာရှိတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာသည်မဟုတ်။ စာရွက်၏သတိပြုပါ!
နူးညံ့သိမ်မွေ့။ အရည်ရွှမ်းသောအာနိသင်ရှိသော pancakes များသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ လျင်မြန်စွာနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးထုတ်ကုန်များမှပြင်ဆင်ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်တူရကီ fillet, ကြက်သားနှင့်လုံခြုံစွာအစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ကြိုးစားရန်သေချာပါစေ!
တူရကီ - 400 Gram (filet)
ကြက်သွန်နီ - 1 သောင်တင်
ကြက်ဥ -2အပိုင်းအစများ
အချဉ် - 1 အနုပညာ။ ဇွန်း
မုန့်ညက် -2အနုပညာ။ ဇွန်း
ဒိန်ခဲ - 100 Gram
ဂရင်း - အရသာမှ
ဆား - အရသာမှ
နံ့သာမျိုးကို - အရသာမှ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - (ကြော်များအတွက်) ကိုမြည်းစမ်းဖို့
တူရကီ Fritters ချက်ပြုတ်နည်း
ကြက်ဆင်စာရွက်ကိုဆေးကြောပြီးလျှင်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါနှင့်ခြောက်သွေ့။ Cube သေးသေးလေးများခွဲပါ။ အပိုင်းပိုင်းငယ်လေ၊ ပိုကောင်းလေ။
မြည်းစမ်းဖို့, သေးငယ်တဲ့ Cube သို့ကုန်တယ်ကြက်သွန်, ဆား, နံ့သာမျိုးကိုထည့်ပါ။
ဒိန်ခဲကိုကြမ်းပြီးလျှင် grater တွင်ဆန်။ ဓားဖြင့်ခုတ်ပါ။
ကောင်းစွာရောထွေးနှင့်မုန့်ညက်ထည့်ပါ။ မုန့်စိမ်းသည်အရည်နည်းနည်းသာဖြစ်ပုံရလျှင်သင်သည်နောက်ထပ် 1-2 ဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်နိုင်သည်။
ဆီနှင့်ဒယ်အိုးအပူပြီးဇွန်းနှင့်ပုံသဏ္givingာန်ပေး, တစ်ဇွန်းနှင့်အတူရရှိလာတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြန့်။ ရွှေရောင်အညိုရောင်သည်အထိနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အလတ်စားအပူဖြင့်တံခါးပိတ်အဖုံးအောက်ရှိ pancakes များကိုကြော်ပါ။
အဆင်သင့်ကြက်ဆင် pancakes ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြစ်စေ၊ Bon appetit!
pancakes များအတွက်အစိမ်းရောင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်သည်: parsley, ဇီယာစေ့, cilantro, အစိမ်းကြက်သွန်နီ၏အမွေး။ ဒိန်ခဲသည်မည်သူမဆိုအတွက်သင့်တော်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်လုံးဝဆန္ဒမပါဘဲဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။